Umise ukunyuka kwamaholo abasebenzi bakahulumeni UMboweni | Scrolla Izindaba
Umise ukunyuka kwamaholo abasebenzi bakahulumeni UMboweni
UNgqongqoshe Wezezimali uTito Mboweni usemise ukukhishulwa kwamaholo abasebenzi bakahulumeni njengengxenye yesabelomali esibi sesikhashana.
Lokhu kubukeka njengesinyathelo esingathandeki, ngoba imihlahlandlela kaMboweni iphakamisa ukuthi kubanjwe amaholo iminyaka emithathu ezayo.
Uhulumeni ubhekene nezikweletu ezinkulu ezidalwe izinkinga ze-coronavirus. UMboweni uthi, umholo okhokhelwa abasebenzi bakahulumeni abayisigidi esi-1.3 wenza iphesenti elingama-40 ayo yonke imali esetshenziswa nguhulumeni.
Lokho cishe izigidigidi ezingama-R567 emiholweni wonyaka wezimali ka-2019/20.
Iminyango eminingi kahulumeni – okubandakanya eyamaphoyisa, eyasekhaya kanye nobudlelwano bamazwe omhlaba – bathathelwe izigidi zamarandi kwisabelomali sayo.
Umsebenzi wokuqala kwaba ukuthi i-South African Airways izothola izigidigidi zayo zokutakulwa.
UMboweni uxwayise ngokuthi ezomnotho zisesimeni esibi – futhi kusazoba kubi kakhulu.